येशूको मृत्यु—यसको सम्झना गर्न किन रोटी र दाखमद्य चलाइन्छ?
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको ईवी उङ्गाबेरे उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चेक चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टुभालुअन डच डाँग्मे डेनिश तामिल तेलगु तोक पिसिन तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली नोंगा न्यानेका पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) मराठी मल्यालम माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी मिजो मिहे मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रुन्यानकोर रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वायुनाइकी वारे-वारे वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन
येशूको मृत्युले गर्दा भविष्यको लागि के सम्भव भयो?—यशैया २५:८; ३३:२४
येशूको मृत्यु इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना थियो। मानिसहरूले अनन्त जीवन पाऊन्‌ भनेर उहाँले मृत्यु भोग्नुभयो। वास्तवमा मानिसलाई खराब काम गर्ने स्वभाव सहित सृष्टि गरिएको थिएन न त तिनीहरूलाई बिरामी हुन वा मर्न नै सृष्टि गरिएको थियो। (उत्पत्ति १:३१) पहिलो मानिस आदमले गर्दा पाप संसारमा प्रवेश भयो। हामीलाई पाप र मृत्युको दलदलबाट बचाउन येशूले आफ्नो जीवन दिनुभयो।—मत्ती २०:२८; रोमी ६:२३ पढ्नुहोस्।
परमेश्वरले आफ्नो प्यारो छोरा हाम्रो लागि यस पृथ्वीमा पठाउनु भएर मानिसलाई असाध्यै माया गरेको कुरा उहाँले देखाउनुभयो। (१ यूहन्ना ४:९, १०) येशूले आफ्नो मृत्युको सम्झना गर्नु भनेर चेलाहरूलाई आज्ञा दिनुभयो। त्यो समारोह तिनीहरूले रोटी र दाखमद्यको प्रयोग गरेर सामान्य तरिकामा मनाउनुपर्ने थियो। हरेक वर्ष यसरी येशूको मृत्युको सम्झना गर्दा परमेश्वर र येशूले देखाउनुभएको मायाप्रति हामी आभारी छौं भनेर देखाइरहेका हुन्छौं।—लूका २२:१९, २० पढ्नुहोस्।
रोटी र दाखमद्य क-कसले खान्छन्‌?
येशूले पहिलो पटक चेलाहरूलाई आफ्नो मृत्युको सम्झना गर्ने आज्ञा दिनुहुँदा उहाँले तिनीहरूसित एउटा करारको विषयमा कुरा गर्नुभएको थियो। (मत्ती २६:२६-२८) यो करारले गर्दा तिनीहरू र अरू सीमित मानिसहरूले स्वर्गमा येशूसितै राजा र पूजाहारीको रूपमा शासन गर्ने सुअवसरको ढोका खुल्यो। लाखौं मानिसले येशूको मृत्युको सम्झना गरे तापनि रोटी र दाखमद्य भने त्यस करारमा बाँधिएकाहरू अर्थात्‌ स्वर्ग जाने आशा भएकाहरूले मात्र खान्छन्‌।—प्रकाश ५:१० पढ्नुहोस्।
झन्डै २,००० वर्ष अघिदेखि यहोवा परमेश्वरले स्वर्गमा राजा हुन योग्य व्यक्तिहरू छान्दै हुनुहुन्छ। (लूका १२:३२) पृथ्वीमा सधैंका लागि बसोबास गर्ने मानिसहरूको तुलनामा स्वर्ग जानेहरूको सङ्ख्या थोरै छ।—प्रकाश ७:४, ९, १७ पढ्नुहोस्।
येशू ख्रीष्टको मृत्युको दिन किन सम्झनुपर्छ?